वर्तमान कार्यसमितिलेले चुनौतीपूर्ण एजेन्डामा काम गरेको छ | Vetkhabar
Home अन्तवार्ता वर्तमान कार्यसमितिलेले चुनौतीपूर्ण एजेन्डामा काम गरेको छ
केन्द्रीय महासचिव, नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघ (उपाध्यक्षका प्रत्यासी)
आसन्न १२ औँ महाधिवेसनबाट यहाँको २ वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । वर्तमान कार्यकालमा भएका कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान कार्यकाल चुनौतीपूर्ण नै रह्यो । हाम्रो अध्यक्षले एउटै एजेन्डा लिएर कार्यसमितिमा आउनुभएको थियो । के के भने आयात, थोक र खुद्रा ३ तहका व्यावसायीले एक अर्काको भूमिकामाथि हस्तक्षेप नगर्ने । अर्थात् आयात गर्नेले आयात मात्र । थोक विक्रेताले थोक विक्री मात्रै गर्ने र खुद्रा विक्रेताले खुद्रा मात्रै विक्री गर्ने । यो एजेन्डा पूरा गर्न मसहित सिंगो कार्यसमितिले उहाँलाई साथ पनि दियो । यसै एजेण्डा कार्यान्वयनमा लान पोखरा र बुटवलमा व्यवसायीको भेला गरियो । निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूमा पनि पठाइयो । कार्यान्वयनमा पनि आयो । तर, यो नीतिको कार्यान्वयन मूर्तरूपमा निर्मूल नै हुन सकेको त छैन । तर, आयात गर्ने व्यवसायी साथीहरूले खुद्रा काउन्टर राखेर औषधी विक्री गर्ने परिपाटीको त अन्त्य नै भइसकेको छ । जस्तो त्रिपुरेश्वर क्षेत्रको सडक छेउमा काउन्टर राखेर खुद्रा काउन्टरसमेत राख्दै आउनुभएका आयातकर्ताहरू त्यहाँबाट बाहिर सरिसक्नुभएको छ । र, अब आयात गर्नेले वर्तमान कार्यसमितिलेले चुनौतीपूर्ण एजेन्डामा काम गरेको छ । खुद्रा काउन्टर राख्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा पूर्णतया कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । त्यस्तै हामीले औषधी विभागसँग शहरी क्षेत्रमा नदिए पनि बाहिर अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रमा पसल दर्ता गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थियौँ । औषधी सल्लाहकार समितिले प्रष्ट रूपमा औषधी व्यवस्था विभागलाई प्रष्ट रूपमा ग्रामीण भेगमा पसल दर्ता गर्न दिनु भनेर भनेको छ । अर्को कुरा एउटा मान्छे १२ घण्टासम्म पसलमा खट्न सक्दैन । त्यसो हुँदा वैकल्पिक व्यवसायी चाहिन्छ भन्ने माग स्पष्टसँग राखेका छौँ । ढिलो चाँडो यो माग पनि पूरा हुने हाम्रो विश्वास छ ।
निर्वाचनका बेला यहाँहरूले एकजुट भएर अघि बढ्ने भनिए पनि यहाँहरूको एउटा पक्ष र अध्यक्षको अर्को पक्षजस्तो देखिएको थियो । त्यसले कार्यसमितिको काममा बाधा परेन ?
निर्वाचनका दौरान हामीबीच प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिए पनि कार्यसमितिमा आइसकेपछि व्यक्ति नभएर सफलता र असफलताको जस/अपजस कार्यसमितिलाई नै जाने भएकोले हामीले एक ढिक्का भएर काम गर्यौं । यसमा कसैलाई समस्या भएन । हामीबीच कुनै मनमुटाव वा कुनै असहज अवस्था बनेन । यो अध्यक्षज्युले पनि महसुस गर्नुभएकोकुरा हो । र, व्यक्त पनि गरिसक्नु भएको छ ।
अब अर्को कार्यकालका लागि यहाँले कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ? अबको कार्यकालमा म आयाततर्फबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागिरह ेको छु ।
आयाततर्फका समस्या के कस्ता भएको महसुस गर्नुभएको छ ?
आयातकर्ता व्यवसायीको प्रमुख समस्या भनेको सिफारिसको अवधि रहेको छ । औषधी व्यवस्था विभागले मानवको औषधी आयातमा २ वर्षका लागि सिफारिस दिन्छ । तर, पशु सेवा विभागले पशुपन्छीको औषधी आयातका लागि ४ महिनाको मात्रै सिफारिस दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ४ महिनाजस्तो छोटो अवधिको सिफारिस कतै पनि दिँदैन । त्यसैले हामीले यो अवधि बढाएर कम्तीमा एक वर्षका लागि दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । अझ एक वर्षभन्दा पनि यो अवधि बढी हुनुपर्ने देखिएको छ । अर्को कुरा हाल खोपजन्य औषधीको हाहाकार छ । हाम्रा साथीहरू पनि यसबाट पीडित हुनुहुन्छ । किसान र प्राविधिक साथीहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ । हामीले यो विषयलाई औषधी व्यवस्था विभागसँग पटक पटक राख्दै आएका छौँ । र, विभागले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाली औषधी उद्योगहरू पनि औषधी उत्पादन र आपूर्तिका लागि योग्य भएर दर्ताको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । भन्सारमा पनि एमआरपीका आधारमा अनावश्यक भन्सार महसुल लगाइरहेका छन् । अहिले एउटा कम्पनीले मार्केटिङमा जति खर्च गरिरहेको छ, आयातकर्ताले पनि मार्केटिङमा उत्तिकै खर्च गरिरहेको छ । कर्मचारीको तलब, स्टकिस्टलाई दिनुपर्ने कमिसन, छुट, रिटेलरलाई दिनुपर्ने कमिसन, छुट र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गर्दा ठूलो खर्च आएको छ । यसलाई पनि कसरी हुन्छ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उपाध्यक्षमा अन्य प्रतिपर्धीले पनि यस्तै समस्या समाधान गर्ने विषयलाई एजेन्डा बनाएर प्रतिस्पर्धामा आउलान् । यहाँको फरक एजेन्डा वा प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ त ?
एउटा भनाइ छ– ‘विनर्स डन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स डिफ्रेन्ट’ । अर्थात् नेता वा विजेताले कुनै फरक काम गर्दैन, उसले फरक तरिकाले काम गर्छ । यही विश्वव्यापी र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै म अगाडि बढाउने छु । मेरो पनि माथिका समस्याभन्दा फरक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छैन ।
अन्त्यमा, आसन्न विराटनगर महाधिवेसनमा उपस्थित हुनुहुने व्यवसायी प्रतिनिधिहरूलाई यहाँको सन्देश के छ ?
प्रतिनिधि छान्दा वा नेता छान्दा विगददेखि वर्तमानसम्म उसले खेलेको भूमिका, उसको योग्यता, क्षमता सबै आधारको मूल्यांकन गरेर सक्षम नेतृत्व छान्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।
Previous articleसामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छु
Next articleपशुपन्क्षी औषधी ब्याबसायी संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा विदुर पौडेल निर्वाचित
लकडाउनले ६० प्रतिशत पशुपन्छी औषधिको खपत घट्यो
स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधार जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ
कोरोना र पशुपन्छी : भ्रम र सत्य
लकडाउनमा सडकका पशुपन्छीलाई खाना खुवाउने स्नेहाको दैनिकी(भिडियो सहित)